Real Estate Listings: » Business Directory » Cleaning Contractors » AU » Ukucoca iCouta1
Indawo yewebhu:: https://coutacleaning.com.au/
Ikhowudi yeposi: 3338
Ukucocwa kweCouta, inkampani eyaziwayo yokucoca iikhaphethi iWerribee, inikezela ngeenkonzo ezinokuthenjwa kumakhaya nakumashishini ngamaxabiso afikelelekayo. Iingcali zethu zinobuhlobo, zinesidima kwaye ziqeqeshelwe ukwenza ikhaphethi yokucoca iTape Cook ngononophelo olukhulu. Siphatha indlela yokucoca isitya enobuchule bokucoca iikhaphethi ezinzulu, siyishiya icocekile ngokupheleleyo. Ngaphandle kokususa ubumdaka, ubumdaka kunye namabala, siya kuyisusa iibhaktheriya kunye nezinye izifo ezibangela iallergener, ukuqinisekisa indawo esempilweni, ekhuselekileyo yosapho lwakho. Ukucoca iCouta yindawo yakho kunye nexabiso eliphantsi leekhaphethi zeSteam zokucoca eBrookfield, eOstreliya. Tsalela umnxeba kwaye uthethe neqela lethu lokucoca ikhaphethi iQela Cook ngokuqeshwa.
Ibhaliswe kwi 21. Jun 2019
Nxibelelana nentengiso 040803xxxx
Ibhaliswe kwi June 21, 2019
IOstreliya, eyaziwa ngokusemthethweni njenge-Commonwealth yase-Australia, lilizwe elizimeleyo elibandakanya ilizwekazi lase-Australia, isiqithi iTasmania, kunye neziqithi ezininzi ezincinci. Lelona lizwe likhulu e-Oceania kunye nelizwe lesithandathu ngobukhulu emhlabeni ngobubanzi bendawo. Abemi abazizigidi ezingama-26 bahlala ezidolophini kakhulu kwaye bagxile kakhulu kulwandle lwasempuma. Idolophu enkulu yaseOstreliya yiCanberra, kwaye idolophu enkulu yona yiSydney. Ezinye iindawo eziphambili zedolophu enkulu iMelbourne, iBrisbane, iPerth, neAdelaide. Abantu bomthonyama baseOstreliya bahlala kwilizwekazi kangangesithuba seminyaka engama-65,000 ngaphambi kokufika kwabahloli baseDatshi ekuqaleni kwenkulungwane ye-17, abathi igama layiNew Holland. Ngo-1770, isiqingatha sase-Australia esisempuma sabangwa yi-Great Britain kwaye saqala sahlala ngoqeqesho oluya e-South South Wales ukusuka ngomhla wama-26 kuJanuwari 1788, umhla owawungumhla wesizwe wase-Australia. Inani labemi lakhula ngokuzinzileyo kumashumi eminyaka alandelayo, kwaye ngexesha le-1850s yegolide, uninzi lwelizwekazi lwalukhe lwaphononongwa ngabahlali baseYurophu kunye nezinye iikholoni ezintlanu ezizimeleyo ezizimeleyo. Ngomhla woku-1 kuJanuwari ngo-1901, iikholoni zathandathu zadityaniswa, zenza i-Commonwealth yase-Australia. I-Australia ke yagcina inkqubo ezimeleyo yenkululeko yedemokrasi esebenza njengekumkani yomgaqo-siseko yenkundla, equka amazwe amathandathu kunye nemimandla elishumi.